သင့်ကလေး သွေးပေါင်ကျခြင်း နှင့် ပတ်သက်ပြီးသိစရာအချက်များ - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon မှ ရေးသားသည်။ 27/07/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
သွေးဖိအား ပုံမှန်ထက်နိမ့်သည့်အခါ hypotension အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ် နှလုံး၊ ဦးနှောက်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်းများ အလုပ်လုပ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့သွေးပမာဏရတော့မှာ မဟုတ်ပါ။
သွေးဖိအားဆိုတာ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ကွဲပြားပေမယ့် သွေးပေါင်ချိန်ကျတဲ့ လူတွေမှာ များသောအားဖြင့် အပေါ်သွေး 100 mmHg ထက်နိမ့်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ပမာဏကတော့ 90 / 60mmHg အောက်ကို နိမ့်လေ့ရှိပါတယ်။ ပြဒါးတိုင်မှာ အပေါ်သွေး(systolic )90 mm Hgနဲ့အောက် သို့မဟုတ် အောက်သွေး(diastolic) 60 mmHg နဲ့အောက်ကို သွေးဖိအားနည်းတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကလေးများအတွက် သွေးဖိအားနည်းတာက ကုသလို့ရပါတယ်။ သို့သော်အရေးကြီးတာက ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သေချာသိဖို့နဲ့ ဆေးသေချာပေးဖို့လိုပါတယ်။
ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ သွေးပေါင်ချိန်ကျရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းများ က ဘာတွေလဲ?
ဒါက ကလေးနေ့စဉ်သောက်သုံးတဲ့ရေပမာဏနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရည်ပမာဏ မမျှလို့ဖြစ်ပါတယ်။ သောက်တဲ့ရေနဲ့ ကိုယ်ထဲက ရေမျှတဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဖျား၊ ပြင်းထန်သောဝမ်းလျှောရောဂါ၊ အလွန်အကျွံချွေးထွက်ခြင်း စတာတွေမှာ ရေတွေ ပိုလိုအပ်လာပါတယ်။ ကိုယ်တွင်း အရည်ပမာဏ ကျဆင်းတာဟာ သွေးကြောထဲက သွေးပမာဏကို ကျစေပြီး သွေးပေါင်ကျခြင်း ဖြစ်စေပါတယ်။
အချို့သောဆေးဝါးများနှင့်ကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်စာတွေကြောင့် သွေးကြောကျယ်စေပြီး သွေးဖိအားလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
သွေးအားနည်းရောဂါဟာ ကလေးတွေအတွက် သွေးပေါင်ကျစေတဲ့ နောက်ထပ်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
Adrenal ဟောမုန်း မလုံလောက်တာဟာ cortisol ၊ aldosteroneနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် လိုအပ်သောဟော်မုန်းများ ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးပေါင်ကျစေတဲ့ အကြောင်းပြချက်က ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဆား သို့မဟုတ် ဆိုဒီယမ်ကို နည်းနည်းသာ စုပ်ယူသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Adrenalmineralocorticoid  insufficiencydeficiency ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးတွေမှာ သွေးပေါင်ကျတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Orthostatic hypotension ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အနေအထားရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ ဖြစ်လေ့ရှိတာကတော့ ကလေးက လဲလျောင်းပြီးနောက် ချက်ချင်း မတ်တပ်ရပ်သောအခါ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွင် သွေးပေါင်ကျတာဟာ စက္ကန့်အနည်းငယ်သို့မဟုတ် မိနစ်အနည်းငယ်သာကြာမြင့်ပါတယ်။
သွေးဖိအားဟာ အသက်ဆက်ဖို့ မရတော့အောင် အနိမ့်ဆုံးရောက်သွားတဲ့အခါ သေစေနိုင်လောက်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါဟာ သွေးကြောထဲက စီးဆင်းမှုပမာဏ နည်းလွန်းတာ၊ နှလုံးမကောင်းခြင်း သို့မဟုတ်သွေးကြော အလွန်အကျွံ ကျယ်သွားခြင်း စတာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ သွေးပေါင်ချိန်ကျရောဂါ ဖြစ်နှုန်းမြင့်စေတဲ့ အချက်တွေက ဘာတွေလဲ?
Alpha blocker လို သွေးတိုးကျဆေးတွေ သုံးနေတဲ့ သူတွေမှာ အခြားသူတွေထက် သွေးပေါင်ကျနိုင်ချေများပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါနဲ့ နှလုံးအခြေအနေတွေက သွေးဖိအားကျစေဖို့ အလာအလာ ရှိပါတယ်။
ကလေးများ သွေးဖိအားနည်းခြင်းရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာကဘာတွေလဲ?
သင့်ကလေး သွေးအားနည်း ရောဂါလက္ခဏာကို မကြာခဏခံစားရလျှင် သင့်ဆရာဝန်ကို ပြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါဟာ အခြား ဆိုးရွားတဲ့ ရောဂါတွေကို ဖော်ပေးနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးများအတွက် သွေးဖိအားနည်းတာ ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကဘာတွေလဲ?
သင့်ကလေး၏နှလုံး၊ ဦးနှောက်နဲ့ အခြား ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ချက်ချင်းကုသမရရှိလျှင် အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကလေးများ သွေးပေါင်ကျ ရောဂါကို ဘယ်လို စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်သလဲ?
အကြောင်းရင်းများ ရှာဖွေရန် သာမန်အားဖြင့် ကလေးအထူးကုက သင့်ကလေး သွေးပေါင်ချိန်၊ သွေးခုန်နှုန်း၊ အသက်ရှူနှုန်း၊ အပူချိန် စတာတွေလို အရေးပါသော လက္ခဏာတွေ စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါစစ်ဆေးမှုတွေလည်း လိုအပ်ရင် ဆက်လုပ်ရပါမယ်။
complete blood count စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကလေး သွေးပေါင်ကျရောဂါကို ဘယ်လို ကုသသလဲ?
ဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး သင့်ကလေးနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးကုသမှုတွေကို ဆရာဝန်က ညွှန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တချို့အခြေအနေတွေမှာ ဆရာဝန်က ပင်မအကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ ရေဓာတ်နည်းခြင်း၊ နှလုံးအားနည်းခြင်း၊ ဆီးချို၊ hypothyroidismစတာတွေကိုပါ ကုသရမှာပါ။
တကယ်လို့သွေးပေါင်ကျတာဟာ ဆေးတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏပြောင်းပစ်တာ လုံးဝရပ်ပစ်တာမျိုးတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ သွေးအားနည်း ရောဂါကို ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သလဲ?
ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းပေါ်မူတည်ပြီးအောက်ပါအချက်တွေကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် လက္ခဏာတွေကို ဟန့်တားနိုင်ပါတယ်။
ရေကတော့ ရေဓာတ်နည်းတာကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး သွေးပေါင်ချိန်ကို မြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့ အစားအစာများစားပါ
သင့်ကလေးအနေနဲ့ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ သူလိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ အကုန်ရနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာ လှုပ်ရှားမှုလုပ်တဲ့အခါ ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ပါ။
ဒါဟာ ကလေးငယ် လှဲနေရာက မတ်တပ်ရပ်တဲ့အခါ သွေးပေါင်ကျခြင်းကြောင့် ခေါင်းမူးဝေခြင်း၊ မေ့မြောခြင်းတွေကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
မနက်အိပ်ရာမထခင်မှာ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် အသက်ပြင်းပြင်းရှူပေးပါ။ ပြီးတော့ မတ်တပ်မရပ်မီ ဖြေးဖြေးထိုင်ပါ။
ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းတဲ့ အစားစာတွေစားပါ။ နည်းနည်းချင်းစီစားပါ။
အစာစားပြီးချိန်မှာ သွေးပေါင်ရုတ်တရက်ထိုးကျတာကို တားဆီးပေးဖို့ သင့်ကလေးစားမယ့် အစားအစာကို ခွဲပြီး တစ်နေ့နည်းနည်းစီကျွေးပါ။ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်များတဲ့ အာလူး၊ ဆန်၊ ပါစတာနှင့် ပေါင်မုန့်တို့ကို နည်းနည်းစီသာကျွေးပါ။
ဒါဟာ သွေးဖိအားကို ခဏမြှင့် ပေးနိုငိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကလေး ဘယ်လောက်သောက်သင့်လဲဆိုတာကို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
သင်က သွေးပေါင်ကျ တတ်သူလား။